बिचार – Hatuwa Herald
Home > बिचार
गाउँले पुस्तकालयको सम्झना
हतुवा हेराल्ड २० भाद्र २०७७, शनिबार बिचार, ब्लग	0
अर्जुन राई भर्खरै पुस्तकालय दिवस सकियो। यो अरु कुनै डे जस्तो व्यापक चर्चा हुने दिवस होइन। त्यसकारण धेरैले थाहै नपाई सकिन्छ। यही मेसोमा अखबार तिर केही विद्वानहरुका लेखहरु आए। तीनै लेखले मलाई पनि सम्झाइदियो आफ्नो गाउँले पुस्तकालयहरुका बारेमा। त्यत्ति बेलाको शिशु शिक्षा विकास नि. मा. वि. सिन्द्राङ्गमा एक दिन रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र धनकुटाका समाचार वाचक श्यामराज राई दुब्डेङहाङ्ग किताव, दराज र टेबलहरु लिएर आउनु भयो। उहाँ पहिला नै स्थापना भई सकेको दिमालुङ्ग पुस्तकालय स्थानीय विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न आउनु भएको रहेछ। हाल विद्यालयको बिक्रम भवन भएको ग्राउण्ड तिर त्यत्तिबेला खालि नै थियो। त्यही खुल्ला ग्राउण्डमा कार्यक्रम गरेर उहाँले
घोडेटारका ली क्वान यू को बिदाई
हतुवा हेराल्ड २९ माघ २०७६, बुधबार February 12, 2020 प्रमुख, बिचार	0
(लामो समय सगरमाथा उच्च मा.वि. को प्रधानाध्यापक रहनुभएको ईश्वरमान राई उमेर हदका कारण २०७३ साल असोज २५ गते बिद्यालयबाट औपचारिक रुपमा बिदाई हुनुभएको थियो। उहाँको बारेमा सगरमाथा उच्च मा.वि. का पुर्व विद्यार्थी एवं नेपाल सरकारका अधिकृत अर्जुन राईको यो आलेख deshkonews .com को Archive बाट) हतुवा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र घोडेटार पुग्ने जो कोहीका लागि दुई वटा ठाँउ चासोको विषय हुने गर्दछ । पहिलो सगरमाथा उच्च मावि र दोस्रो अटल सिंह काजीको गढी । गढीको ‌ऐतिहासिक महत्व भए पनि त्यहाँको स्वतन्त्र घुमफिर गर्ने र सौन्दर्यात्मक पक्ष अब बाँकी छैन । त्यसकारण गढी इतिहास प्रति रूचि भएका व्यक्तिहरूका लागि बढि चासोको विषय
ईश्वरमान राई	Read More
हतुवा हेराल्ड ५ कार्तिक २०७६, मंगलवार बिचार	0
– राज परियार लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष समावेशीकरण पनि हो । समावेशीकरणले कुनै पनि राज्यले प्रदान गर्ने अवसर र स्रोतको न्यायोचित वितरणको सुनिश्चित गर्दछ । साथै शक्तिमा समान पहुँचको अवसर प्रदान गर्दछ । अर्कातिर समावेशीकरण सुशासनको एउटा अभिन्न अंग पनि हो । यसर्थमा कुनै पनि मुलुकका नागरिकले समान अधिकारको अनुभुत गर्ने र राज्यको पहुँचमा समान हिस्सेदारी दावी गर्ने मौका पाउनु पनि समावेशीकरण हो । यसले समाजमा रहेको असमानताको अन्त्य गर्दछ । सम्पूर्ण नागरिकलाई समान अधिकार र सम्मानित जीवनको अनुभूत गराउँदछ । यहाँ आरक्षणका लागि पहिचान भएका समुह मध्ये दलित समुदायका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । आजकल यो समावेशीकरण भन्ने शब्द जताततै
हतुवागढी दरबार : चासो र आवश्यकता
हतुवा हेराल्ड ७ भाद्र २०७६, शनिबार September 8, 2019 बिचार	0
प्रेमकुमार राई अध्यक्ष, हतुवागढी गाउँपालिका भोजपुर नेपाली सेना एउटा विशिष्ट अवस्थामा हाम्रो भुगोलमा आएर बसेको हो। विकासका पुर्वाधारहरु मध्ये सेनाको उपस्थिती पनि महत्वपुर्ण सुचक हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले सेनालाई हाम्रो भुगोलबाट बिस्थापन गर्ने भन्दा पनि ब्यबस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हो। र अर्को तिर हतुवा दरबारको भग्नावशेष अहिलेकै रुपमा सिमित राखिनुहुन्न भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो। त्यसको ऐतिहासिकताको उत्खनन् गरेर, मौलिकताको संरक्षण गर्दै ईतिहास अध्येताहरुका लागि एउटा महत्वपुर्ण सन्दर्भ गन्तव्य तथा सबैका लागि पर्यटकिय आकर्षणका रुपमा बिकास गरिनुपर्छ जसले यो ठाउँको कला, संस्कृती, ऐतिहासिकता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यहरु प्रतिबिम्बित गर्न सकोस्। लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्वपछिको राजनैतिक संक्रमण त्यसपछि उत्पन्न विभिन्न राजनैतिक तथा सामाजिक आयामहरुको ब्यबस्थापन गर्दै
हतुवाली प्रधानहरु र माटोको हस्तकला
हतुवा हेराल्ड २८ असार २०७६, शनिबार July 13, 2019 बिचार, ब्लग	0
पुर्वी नेपालको तत्कालिन माझकिराँत, माझकिराँतको हतुवाक्षेत्र, राई बहुल भए पनि लामो समय अघि देखि नै बहुजातिय समुदायको रुपमा बिकसित भएको हो भन्न सकिन्छ। केही लिखित ईतिहासहरुमा हतुवा राज्यका किराँती राजाहरुले स्थानिय बस्नेतहरुलाई `काजी´ पदवी दिएर राज्य संचालनमा सहभागी गराउने गरेको लिखत भेटिन्छ। अर्कातिर यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हरेक जातजातिहरुको हतुवासंग जोडिएको ईतिहास लामो भएकोले पनि बहुजातिय समाजको अभ्यास पुस्तौँदेखी चलिरहेको हो भन्न सकिन्छ। जातियतासंगै भाषा जोडिन्छ, भाषासंगै मौलिक संस्कार, संस्कृती तथा मौलिक सीप र कलाहरु संगै जोडिएर आउँछन्। यहाँका हरेक जातिय समुदायसंग आ-आफ्ना कला, संस्कृती, सीप तथा संस्कारगत मान्यताहरु बिद्यमान छन्, जो तिनको मौलिक पहिचान हुन्। सीप तथा कला-कौशल सिर्फ पहिचान
पहाडकी रानी दार्जीलिङ
हतुवा हेराल्ड २७ असार २०७६, शुक्रबार बिचार	0
त्यस दिन म अलि बिसञ्चो थिएँ, घरदेखि कतै जान मन थिएन। झ्यालनेर बसेर रमिता हेर्दै थिएँ। घर अघिको आगनमा ढकमक फुलेका सयपत्रि हेर्दै दशैं तिहारमा हुने रमझमको सम्झना गर्दै थिएँ। उहि आगन अघिको बाटो भएर कुनाल म तर्फ आइरहेको देखेँ। म जुरूक्क उठेँ अनि ढोका खोलेँ, कुनाल भित्र आयो। सधैं "बजार जाँउ!, कतै जाँउ!"-भन्दै आउँने कुनाललाई, कतै जाँउ भन्न नै आएको भन्ठानेर मैले सोझै कुरा राखेँ- "आज म कतै पनि जाने हालतमा छुइन, ज्वरोले निधार पाकीरा'छ। बरू...." मेरो कुरा यतिमै काट्दै उसले "जसरी भएनी जानै पर्छ आज त, मैले ट्युसन जाने बहाना बनाएर घरबाट बाहिरिएको हो, जसरी पनि जाने नै हो।" यति कुरा सुनेपछि पनि
विशाल सर्घाईँ	Read More
हतुवाका प्राथमिकताहरु के-के हुन सक्छन्?
हतुवा हेराल्ड २४ असार २०७६, मंगलवार बिचार	0
अठारौं शताब्दी सम्म छुट्टै अस्तित्व बोकेको हतुवा मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहको रुपमा पुन: अस्तित्वमा आएकोछ। लिखित इतिहासको अभावका कारण त्यत्ति बेलाको हतुवाको अवस्था बारेमा बृहद् धारणा बनाउन कठिन छ। तर लामो समय पछि स्थानीय निकायहरु परिमार्जित भई बनेको स्थानिय तह हतुवाका बारेमा भने हामी धेरथोर जानकार छौं। स्थानीय तह बनिसके पछि जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको पनि दुई वर्ष भन्दा बढि भइसकेकोछ। यसले सर्वसाधारणमा जुन आशाको सञ्चार गराएको थियो अब भने त्यसको परिक्षणको क्रम शुरु भइसकेकोछ। आशावादी नागरिकहरुको आकांक्षा निक्कै चुलिनु स्वभाविक हो। ती आकांक्षाहरुको व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सकिएन भने पुन: पुरानै गञ्जागोलको अवस्थामा पुग्ने खतरा उत्तिकै
अर्जुन राई	Read More
संघियता कार्यन्वयनसँगै आशा जाग्दै, कार्यक्रमसँगको आशा र भरोशा ।
हतुवा हेराल्ड ९ असार २०७६, सोमबार बिचार, समाचार	0
शंकरहरि खालिङ्ग पूर्वको कर्णाली भनेर सम्बोधन गरिने भोजपुर एकिकृत राज्य व्यवस्थाबाट सधै उपेक्षित रह्यो । केन्द्रको नजरमा कहिले परेन भोजपुर । भोजपुरमा पनि हतुवागढी सधै पहुचबाहिर भयो । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ कालागि प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सरकारले ४२ अरब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाको बजेट संसदमा पेश गरेको छ । यो बजेट पोहोर साल भन्दा करिव ६ अरबले बढि हो । सरकारले बजेटमा कृषि, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेको छ । मुलुक संघियतामा गएसँगै हतुवागढी सरकारी योजनाहरुमा समेटिन शुरु भएको छ । यस वर्ष भरखरै संघिय तथा प्रदेश सरकारहरुले संसदमा बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन्् ।
Nepali SandeshShanakr Hari Raiअरुण आकाशपूर्णसन्ध्या समाधीस्टुडियो किङ्गहतुवागढी	Read More
हतुवा दरबार र छुटिरहेको किराँती ईतिहास
हतुवा हेराल्ड ६ असार २०७६, शुक्रबार June 21, 2019 बिचार	0
दिलिप बान्तावा हतुवा दरवार क्षेत्रलाई आवस्यक उत्खनन् गरि त्यसको ऐतिहासिकता संरक्षण गर्नु भनेको सिंगो हतुवा क्षेत्रको ईतिहास जगेर्ना गर्नु हो, सभ्यताको अध्ययन गर्नु हो। यदि अहिले कै अवस्था रहन दिने हो भने अबको केही पुस्तापछी हतुवागढिको ईतिहास हराएर जाने पक्का छ । ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदाहरुलाई तिनको मौलिकता अनुसार संरक्षण गर्न सकिएन भने त्यसले भोलि बताउने ईतिहास गलत हुनेछ। बि. सं. २०६२ सालको कार्तिक अन्तिम हप्ता बित्दैथियो। चिसोको मौसम शुरु हुँदै गरेकोले शीतले बिहान छोडेकै थिएन। सँधै जस्तै साढे नौ बज्दै गर्दा म स्कुल निस्किएँ। गाउँ मध्येकै डाँडामा भएको स्कुल नजिकै तत्कालिन रानिबास गा.वि. स. कार्यालय र अलि पर निक्कै पुरानो विशाल
हतुवा हेराल्ड ४ असार २०७६, बुधबार June 19, 2019 बिचार	0
-- चेवन राई हुन त आज देखिएको माइतीघरको जनसागर निकै ठुलो हो । तर यहि समय हङकङमा भएको आन्दोलन जस्तो ठुलो होइन । हङकङमा करिब बीस लाख जनसागर उर्लिए भनिएको छ । त्यो पनि एउटा सुपुर्दगि बिधेयक को बिरोधमा । त्यस बिधेयक अनुसार कसैले हङकङमा अपराधिक गतिविधि गरे उसलाई चाइना सुपुर्दगि गर्ने भनिएको छ । उक्त कानुन सामान्य लागेता पनि, सुनिएता पनि त्यो कानुन लागू भएपछि चाइना सरकारले त्यसै कानुनलाई टेकेर अपराध अनुसन्धानको लागि जो कसैलाई पनि पक्राऊ गरि चाइना लगि गुमनाम पार्न सक्छ । चाइना सरकार प्रतिको यहि अविस्वासले नै सुपुर्दगि बिधेयकको खिलापमा हङकङमा त्यत्रो मानिस सडक निस्किए । अन्त्यमा त्यहाँको सरकार